Chronic Pelvic Pain (နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Chronic Pelvic Pain (နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု)
Chronic Pelvic Pain (နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု) ကဘာလဲ။
နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဆိုသည်မှာ တင်ပဆုံအောက်နှင့် တင်ပါးနှစ်ခုကြားနေရာတွင် ဖြစ်ပွားသော နာကျင်ကိုက်ခဲနေမှုဖြစ်သည်။ ထိုနာကျင်မှုမှာ နာတာရှည်ဖြစ်ပြီး 6လ(သို့)ထို့ထက်ပို၍ကြာမြင့်နိုင်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ပေါ်၍ပျောက်သွားသော သိပ်မပြင်းထန်သည့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုသာဖြစ်တတ်သည်။ သို့သော်အခြားကိစ္စများတွင် နာကျင်မှုသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဆိုးဝါးလာပြီး အိပ်ရေး၊အလုပ်(သို့)နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါသည်။
နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင်နာကျင်မှုတွင် အကြောင်းအရင်းများစွာရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားရောဂါတခု၏ လက္ခဏာ(သို့)သူ့ဘာသာဖြစ်သောနာကျင်မှုတခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်ရောဂါတခုကြောင့် သင်၏ထိုနာကျင်မှုဖြစ်ပွားပါက ထိုရောဂါကို ကုသခြင်းဖြင့် သင်၏နာကျင်မှုကို ပျောက်သွားစေနိုင်ရန်လုံလောက်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် ကိစ္စအများစုတွင် နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွေ နာကျင်မှု၏ တိကျသောအကြောင်းအရင်းကို မသိရချေ။ ထို့ကြောင့် ကုသမှု၏ ပန်းတိုင်မှာ သင်၏နာကျင်မှုနှင့် အခြားသော လက္ခဏာများ ကို သက်သာစေရန်ဖြစ်ပြီး သင်၏ဘဝနေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ဖြစ်သည်။
Chronic Pelvic Pain (နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Chronic Pelvic Pain (နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နာတာရှည်တင်ပဆုံ နာကျင်ကိုက်ခဲမှု ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
နာတာရှည်တင်ပဆုံ နာကျင်ကိုက်ခဲမှု ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အရောင်၊အနံ့(သို့)ပျစ်စည်းမှုရှိသောမိန်းမကိုယ်မှထွက်သည့် အရည်
တိကျသောနေရာတခု(သို့)နေရာအနှံ့ပြားတွင် ဝမ်းဗိုက်(သို့) တင်ပဆုံရိုးခွေဝန်းကျင်တွင် နာကျင်မှုဖြစ်ခြင်း
သင်၏ တင်ပဆုံရိုးခွေနေရာရှိ အချို့နေရာများသို့ဖိလိုက်သောအခါ နာကျင်ခြင်း
Chronic Pelvic Pain (နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွေဝန်းကျင်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုသည် ဖြစ်စေနိုင်သည့် အကြောင်းအရာများစွာရှိသော ရှူပ်ထွေးသည့် ရောဂါဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင် ရောဂါတခုတည်းကိုသာ ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းအဖြစ်တွေ့ရှိရနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း တဖက်မှ ကြည့်လျှင်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဟူသည် များပြားလှသောရောဂါများမှ ဖြစ်ပွားလာနိုင်သည်။ဥပမာ မိန်းမတစ်ယောက်သည် endometriosis နှင့် interstitial cystitis ရှိသော အခါ တင်ပဆုံရိုးခွေဝန်းကျင်တွင် နာကျင်ကိုက်ခဲလာနိုင်သည်။
Endometriosis – သင်၏ဟော်မုန်းပမာဏများတက်လိုက်ကျ
လိုက်ဖြစ်သောအခါသင်၏သားအိမ်နံရံရှိတစ်ရှူးသည် သားအိမ်အပြင်ဘက်တွင် ကြီးထွားလာခြင်းပြီး
နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွေဝန်းကျင်ရောင်ရမ်းမှုရောဂါ -နာတာရှည်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် တင်ပဆုံဝန်းကျင်ရှိအစိတ်အပိုင်းများအား အမာရွတ်တည်စေခြင်းဖြစ်သည်။
သားဥအိမ်ရှိလက်ကျန်အပိုင်းအစများ – သားအိမ်၊သားဥအိမ်များနှင့် သားဥပြွန်များကို ခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးသောအခါ အပိုင်းအစများကျန်ခဲ့နိုင်ပြီး နာကျင်ကိုက်ခဲစေသောအရည်အိတ်များဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။
Fibroids များ – ကင်ဆာမဟုတ်သော သားအိမ်မှ ကြီးထွားမှုများဖြစ်ပြီး သင်၏ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းတွင် ဖိအား(သို့)လေးလံမှုတို့ကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
ဆီးအိမ်၏နာကျင်ကိုက်ခဲမှုရောဂါစု – ထိုရောဂါသည် သင်၏ဆီးအိမ်တွင် နာကျင်စေကာမကြာခဏဆီးသွားစေသည်။ သင်၏ဆီးအိမ်ဖောင်းကားလာသောအခါ သင်သည်တင်ပဆုံရိုးခွေဝန်းကျင်နာကျင်မှုကို လည်းခံစားရနိုင်ပြီး ဆီးရည်များဆီးအိမ်အတွင်းကုန်ခန်းလျော့နည်းမှ သာ ယာယီပြန်ကောင်းလာတတ်သည်။
တင်ပဆုံရိုးဝန်းကျင်ပြည့်ညက်စုခဲနေသော ရောဂါစု – အချို့သောဆရာဝန်များသည် သင်၏သားအိမ်နှင့် သားဥအိမ်ဝန်းကျင်တွင် ကြီးမားကွေးကောက်သော သွေးပြန်ကြောများက တင်ပဆုံရိုးခွေဝန်းကျင်နာကျင်မှုကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ- စိတ်ကျရောဂါ၊နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု(သို့)လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊(သို့)ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်ချေကိုပိုများစေသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုများသည် ပိုနာကျင်ကိုက်ခဲစေပြီး နာတာရှည်ကိုက်ခဲမှုများနှင့် အသက်ရှင်ရသည်မှာလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုအချက်နှစ်ချက်သည် တခုနှင့်တခု ပြန်လည်အကျိုးပြုနေသော စက်ဝိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။
ငါ့ဆီမှာ Chronic Pelvic Pain (နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
နာတာရှည်တင်ပဆုံ နာကျင်ကိုက်ခဲမှု ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ(သို့)လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရဖူးခြင်း။ နာတာရှည်တင်ပဆုံဝန်းကျင်ကိုက်ခဲနေသောမိန်းမတဝက်နီးပါးသည် ယခင်အတိတ်တွင် အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရဖူးကြောင်းသတင်းပေးကြသည်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု(သို့)ဗိုက်(သို့) မိန်းမတင်ပဆုံဝန်းကျင်ပိုင်းတွင် ခွဲစိတ်မှုခံယူဖူးခြင်း။ ဆီးလမ်းကြောင်းမလုံစေသော ခွဲစိတ်မှုများလည်းပါဝင်သည်။
စိတ်ကျရောဂါရာဇဝင်ရှိခြင်း။ နာကျင်မှုနှင့် စိတ်ဓါတ်ကျမှုတို့သည် ဆက်စပ်နေသည်။
နောက်ကျောနှင့် တင်ပဆုံဝန်းကျင်တွင် ဒဏ်ဖိအားများပေးနိုင်သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ကလေးမွေးခြင်း ဥပမာ အကောင်ကြီးသောကလေးအားမွေးဖွားလိုက်ရခြင်း၊ခက်ခဲသောမွေးဖွားမှု(သို့)ညှပ်စွဲမွေးခြင်း(သို့)လေစုပ်စက်ဖြင့်မွေးခြင်း စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
Chronic Pelvic Pain (နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
တင်ပဆုံဝန်းကျင်ကိုကိုင်တွယ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုး၏လက္ခဏာများ၊ပုံမှန်မဟုတ်သော ကြီးထွားမှုများ(သို့)တင်ပဆုံရိုးခွင်အောက်ပိုင်းကြွက်သားများမာတောင့်နေခြင်း စသည်တို့ကို သိရှိနိုင်သည်။
ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း – အထက်ပါအတိုင်းကိုင်တွယ်စစ်ဆေးနေစဉ်တွင် သင်၏ဆရာဝန်မှ chlamydia (သို့) ကာလသား ရောဂါပိုးဝင်နေခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြား
တတ်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်သည် သင့်ကိုယ်တွင်းရှိသွေးဆဲလ်များပမာဏနှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ရန် သွေးစစ်ခြင်း၊ဆီးစစ်ခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်
အယ်ထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း – ထိုစမ်းသပ်မှုသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်အသံလှိုင်းများကို အသုံးပြုကာ ကိုယ်တွင်းရှိ တိကျသောတည်ဆောက်ပုံများကို ရယူနိုင်ပြီး မျိုးဥအိမ၊်
အခြားသော ဓါတ်မှန်စစ်ဆေးမှုများ။ ဗိုက်ဓါတ်မှန်၊ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်(သို့)သံလိုက်ဓါတ်မှန်များကိုလည်း မူမမှန်သော တည်ဆောက်မှုပုံစံများနှင့် ကြီးထွားမှုများအားသိရှိနိုင်ရန်ညွှန်ကြားခံရနိုင်သည်။
ဗိုက်ကိုအပေါက်ဖောက်၍ကြည့်ရှူခြင်း။ သင်၏ဆရာဝန်သည် သင့်ဝမ်းဗိုက်ပေါ်တွင် သေးငယ်သောဓါးရာပေးကာ ကင်မရာပါသည့် ပါးလွှာသော ပြွန်တချောင်းကိုထည့်ကာကြည့်ရှူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့
စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သင်၏ဆရာဝန်ကို သင်၏တင်ပဆုံရိုးခွင်ရှိအစိတ်အပိုင်းများနှင့် မူမမှန်သည့် တစ်ရှူးများ(သို့)ပိုးဝင်သည့်လက္ခဏာများကိုလည်းမြင်နိုင်စေသည်။ ထိုစစ်ဆေးမှုသည် endometriosis နှင့် နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင်ရောင်ရမ်းသည့်ရောဂါတို့ကိုစမ်းသပ်တွေ့ရှိနိုင်ရန် အသုံးဝင်သည်။
Chronic Pelvic Pain (နာတာရှည်တင်ပဆုံရိုးခွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက နာတာရှည်တင်ပဆုံဝန်းကျင်ကိုက်ခဲမှု ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် နာတာရှည်တင်ပဆုံဝန်းကျင်ကိုက်ခဲမှု ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်ကိုဆေးကြောရာတွင် ဘက်တီးရီးယားမဝင်စေရန် အရှေ့မှနောက်သို့သာ သန့်စင်အောင် သုတ်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရပါမည်။
Chronic pelvic pain in women. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-pelvic-pain/home/ovc-20208133. Accessed 12 Mar 2017.
Pelvic pain. http://www.webmd.com/pain-management/guide/pelvic-pain#2. Accessed 12 Mar 2017.
Pelvic Inflammatory Disease (PID). http://www.healthline.com/health/pelvic-inflammatory-disease-pid#Risks2. Accessed 12 Mar 2017.